Maninona no mampiasa Drupal? | Martech Zone
Manontany aho vao tsy ela Inona no atao hoe Drupal? ho fomba fampidirana Drupal. Ny fanontaniana manaraka tonga ao an-tsainao dia ny hoe "Tokony hampiasa Drupal ve aho?"
Fanontaniana lehibe io. Imbetsaka ianao no mahita haitao ary misy zavatra manosika anao hieritreritra ny hampiasa azy io. Amin'ny tranga Drupal dia mety efa naheno ianao fa misy tranokala malaza be dia be mihazakazaka amin'ity rafitra fitantanana atiny loharano misokatra ity: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Connect, ary ny New York Observer, hanome anarana vitsivitsy (bebe kokoa Drupal ampiasaina eto fanadihadiana tranga amin'ny Drupal.org)
Fa maninona Drupal? Mety namboarina niaraka tamin'ireo ve ireo tranonkala etsy ambony WordPress, Joomla!, na DotNetNuke?
Maninona ny fikambanana no mampiasa drupal
Ny vondrom-piarahamonin'ny mpamorona dia matanjaka sy mirotsaka an-tsehatra. Module natolotra no foto-tsakafon'ny Drupal. Ireo modely mandray anjara, nataon'ny olona an'arivony, dia manitatra ny fiasan'ny Drupal hanampiana ireo fepetra takiana manokana Drupal fototra. Androany, misy maodely 5000 mahery ho an'ny Drupal 6 (ny famoahana ankehitriny). Ireo mpandray anjara amin'ireto modules ireto dia miasa ihany koa amin'ny fanaovana Drupal tsaratsara kokoa sy ilaina amin'ny alàlan'ny famolavolana ny kinova Drupal manaraka. Drupal 7, marina Navoaka tamin'ny 5 Janoary 2011, misy fanatsarana hanamorana ny Drupal hametraka, hanohana ary hivoatra rehefa mandeha ny fotoana. Ary Drupal 8 dia manomboka fotsiny miaraka amina drafitra hanatsara kokoa an'i Drupal.
Misy ny ekosistia vibrant Drupal. Amin'ny maha tetikasa open source azy dia mandroso manodidina an'i Drupal ireo orinasa velona sy mandroso. Midika izany fa misy orinasa mamorona tranokala sy rafitra mifangaro miaraka amin'i Drupal hanohanana ny filan'ny mpanjifa lehibe sy kely. Midika koa izany fa tena dinihina ny Drupal rehefa mila vahaolana mafy ny olana mafy. Ohatra ireo orinasa manolotra vokatra / serivisy Drupal Lullabot (consulting sy fiofanana), Acquia (fampiantranoana sy fanampiana manokana), Dingana: // Teknolojia (famolavolana namboarina, fizarana Drupal amin'ny vondrom-piarahamonina, fakan-kevitra), Volacci (Drupal SEO), ary Palantir.net (famolavolana sy fifandraisana). Betsaka, maro hafa no hita ao amin'ny Tsena Drupal.org.
Ny fihaonana tsy tapaka Drupal dia mitranga manerana an'izao tontolo izao. Misy olona hitodihana rehefa ilaina ny manam-pahaizana. In fihaonana amin'ny olona miseho tsy tapaka any amin'ny tanàna lehibe sy kely manerantany. Ankoatr'izay, ny Drupal iray manontolo dia mivory mandritra DrupalCon. Ity hetsika indroa isan-taona (Amerika Avaratra sy EU, mifandimby) ity dia mitambatra olona 3000 hiresaka, hianatra, hampianatra, hahita ary hifalifaly manodidina an'i Drupal.
Drupal dia notohanan'ny vondrom-piarahamonina indostrialy hafa. Drupal dia nahazo fanampiana avy amin'i: Google, eo ambaniny Fandaharam-potoana Summer of Code, hanampiana amin'ny fanitarana ny fiasa Drupal sy ny endri-javatra; ny Ny Fondation John S. sy James L. Knight nanome famatsiam-bola hampiroborobo ny hevitra momba ny famoahana atiny mahomby amin'ny Internet; Sony Music nanolotra ekipa natokana hanampy amin'ny fanitarana ny Drupal ary avy eo dia nanome ireo fanatsarana ireo hiverina amin'ny fiarahamonina Drupal; ary Thomson Reuters dia nanampy tamin'ny fampivoarana sy ny fampiraisana Calais ao amin'ny Drupal hanampy amin'ny fanitarana ny tranokala azo ampiasaina.
Drupal dia tsy rindrambaiko iray fotsiny fa afaka sintonina sy andramana. Izy io dia misy olona tena voarohirohy, mamaha ny tena olana ary miasa mba hanamora ny fampiasana ny tranonkala, ny fampahalalana ary ny haitao amin'ny sisa amintsika. Midika izany fa misy olona azonao itodihana mora foana hanatsara ny tranonkalanao.
Tags: fitantanana votoatyrafitra fitantanana atinydrupalfampandrosoana drupalsary drupaltantaran'ny drupalintro to drupalinona no drupalmaninona no mampiasa drupal
Ahoana ny fananganana rohy fandinihana ho an'i Google, Bing, Yelp, ary bebe kokoa…
Mar 29, 2011 ao amin'ny 9: PM PM
@trufflemedia - Nojereko hatrany ny Drupal ho sehatra tsara kokoa amin'ny fampandrosoana ny tambajotra sosialy fa tsy ny atin'ny tranokala na bilaogy. Ho an'izay, WordPress dia tiako indrindra (manokana). Thoughts?
Mar 30, 2011 amin'ny 3: 03 AM
Doug, efa fantatrao fa eo aminao eo amin'ny WordPress bandwagon ho an'ny CMS & bilaogy aho. Manana mpanjifa nampiasa na nampiasa Drupal sy Joomla izahay & ny marimaritra iraisana teo amin'izy ireo dia ny WordPress dia mora ampiasaina kokoa. Marina, Drupal dia manana tombony amin'ny tranga sasany, saingy vitsy ary lavitra ny fahitako azy.